IXESHA LE-MANDALORIAN 3 LOKUKHUTSHWA KOMHLA | ISAMENTE, IYELENQE, IINGCINGA-IRADIO TIMES - INZULULWAZI
Ixesha lokukhutshwa kweMandalorian lonyaka 3 ukukhutshwa komhla kuqinisekisiwe - cast, ibali kunye neendaba zamva nje
Abafani banokulindela ukulinda ixesha elide ngaphambi kothotho olulandelayo lweMandalorian, ngokukhutshwa kweNcwadi kaBoba Fett ebekelwe ukuqala ngoDisemba ngaphambi kokuba siqhubeke nolunye uhambo lweDin Djarin.
Kwaye kude kuqale ukudubula bhanyabhanya okunene siyazi kancinci malunga nendlela ikamva likaMando eliza kuvela ngayo, nokuba siza kubona uGrogu / Baby Yoda ebuyile kuthotho kwaye kwenzeka ntoni eMhlabeni (okanye eMandalore) ne-Darksaber.
Ke siyazi ntoni? Ewe, enye yezinto ezimbalwa esinokuthi ngokuqinisekileyo malunga nexesha lesithathu ngumntu onokuthi ngekhe phawu - I-Gina Carano's ex-Rebel bruiser kunye neRiphabhlikhi kaMarsh Cara Dune, kunye noLucasFilm etyhila umlingiswa ophindaphindiweyo ngekhe abuye emva kwezithuba zemidiya zentiyo ezivela kumdlali weqonga.
Nokuba oku kuya kuchaphazela amabali acwangcisiweyo exesha lesithathu- okanye i-spin-offs Ranger yeRiphabhlikhi eNtsha kunye neAhsoka - akucaci, nangona inkwenkwezi ngokubanzi uthotho uPedro Pascal wacacisa ukuba singabona ngaphezulu crossover phakathi kweDisney + iidrama eziya phambili.
Bakulwandiso lweli hlabathi, apho kukho izinto ezininzi ezingalindelekanga kunye namaxesha azakujongana nawo, uxelele. IndieWire .
Ukuba isimilo besinokuwela siye kula mazwe, siyakusetyenziswa ngendlela ekungafunekiyo ukuba ilindelwe. Andifuni ukumosha isimanga sokuba ingaba abalinganiswa abasuka kumboniso esele sazi ukuba bayawela.
Bhalisela iDisney + ngoku nge- $ 5.99 ngenyanga okanye i- £ 59.99 yonyaka opheleleyo.
Okwangoku, funda kuyo yonke into ofuna ukuyifumana malunga nexesha lesithathu laseMandalorian.
Ixesha lokukhutshwa kweMandalorian lonyaka 3
NgoDisemba ngo-2020, umboniso we-Mandalorian uJon Favreau wabonakala kwiGood Morning America ukucacisa izinto ezimbalwa ngekamva le-Star Wars kumabonwakude.
Phakathi kwabo, wabhengeza ukuba uthotho lwencwadi ethi Boba Fett okwangoku iyimveliso kwaye iya kuba ngumdlalo olandelayo we-Star Wars obonisa umhlaba kwiDisney Plus (kulindeleke ukuba ifike ngoDisemba ka-2021).
Nangona kunjalo, wongeze ukuba ukufota kwi-Mandalorian isizini yesithathu izakuqala kwakamsinya emva komdlalo osongelwe ngu-Boba Fett, ecebisa ukuba uDin Djarin angabuya kwangoko ngo-2022 .
Ukuba unomdla wokufumana amaxesha onyaka adlulileyo, uyakufuna ukubhaliselwa kwinkonzo yokusasaza. Bhalisela iDisney + ngoku nge- $ 5.99 ngenyanga okanye i- £ 59.99 yonyaka opheleleyo.
Ixesha leMandalorian 3
UBoba Fett kunye noDin Djarin kwiMandalorian (Disney +)
Akukho zinkcukacha ziqinisekisiweyo malunga nabalingisi bexesha lesithathu leMandalorian, kodwa umntu unokucinga ukuba uPedro Pascal uza kubuya kwindima yendima.
Olu luhlu lubone umnyango ojikelezayo weenkwenkwezi zeendwendwe ukusukela kwixesha lazo lokuqala, kodwa ukuthanda kukaCarl Weathers 'uGreef Karga kunye noBill Burr owayekade eyi-Imperial Mayfeld bonwabele ukubonakala kwabo, ngenxa yoko kubonakala ngathi aba bantu ngakumbi banokubuyela kumabali azayo. .
Ngokunjalo noTemuera Morrison kunye noMing-Na Wen njengebali elidumileyo likaBoba Fett kunye no-sharpshooter uFennec Shand ngokwahlukeneyo, kodwa kubonakala ngathi mancinci amathuba okuba baphinde babuye ngoku kuba bephoswa kuthotho lwabo lweDisney + (aka Incwadi kaBoba Fett ).
Kukwanjalo ke naku-Ahsoka Tano kaRosario Dawson, owaqala njengenkwenkwezi yeendwendwe kwiMandalorian isizini yesibini ukuya kwindumiso evela kubalandeli nakwabagxeki, ngaphambi kokuba umboniso wakhe wedwa ukhawuleze anikwe ukukhanya okuluhlaza.
Okwangoku, ngelixa singazi ncam ukuba ngubani oza kubuya siyamazi umlingisi omnye ongazukubakho-inkwenkwezi yeendwendwe ephindaphindayo uGina Carano, umlingiswa wakhe uCara Dune akazukubuyela kwindalo iphela ye-Star Wars kulandela izithuba zempikiswano ezenziwe nguCarano kwezentlalo. eendaba.
UGina Carano akaqeshwanga okwangoku nguLucasfilm kwaye akukho zicwangciso zokuba abe kwixesha elizayo, ummeli weLucasfilm wathi ngoFebruwari 2021.
Nangona kunjalo, amajelo akhe eendaba ezentlalo egculela abantu ngokusekwe kwinkcubeko nakwinkolo yabo iyenyanyeka kwaye ayamkelekanga.
Isiqendu seMandalorian sexesha lesi-3
Umntwana uYoda kwiMandalorian kwiDisney Plus (Disney +)
Ukuphela kwesizini ye-Mandalorian kusinike iingcebiso ezinkulu malunga nento esinokuyilindela ukusuka kwixesha lesithathu, eyona nto ibalulekileyo kukuqhekeka kochungechunge oluphakathi. Funda uhlolo olupheleleyo lweMandalorian malunga neenkcukacha zokugqibela ezinzulu.
Ekupheleni kwesiqendu uLuka Skywalker (uMark Hamill) ufika eze kuthatha uGrogu / Baby Yoda kuqeqesho, kwaye emva kokuvalelisa ngokweemvakalelo (eyabona uMando ethatha isigcina-ntloko sakhe) UDin ushiyeke emi yedwa, Umntwana usiwe kwikamva elingaziwayo.
Oku kubonakala ngathi kucebisa ukuba uMando kunye noBaby Yoda bazokwahlulwa ubuncinci kwinxalenye yolu chungechunge lulandelayo njengoko ugqibela eqhubeka noqeqesho-kodwa ngenxa yokuthandwa komlinganiswa kunye nokubaluleka kwakhe kumdlalo, kubonakala ngathi akunakulindeleka bagcinwe. ukwahlukana ixesha elide.
Ngubani owaziyo? Mhlawumbi siza kuphinda sibone ezinye zedijithali zikaLuka Skywalker njengoko eqeqesha uBaby Yoda, ecinga ukuba uMark Hamill yibhodi enye yolonwabo oluninzi kumnyele okude kakhulu.
UMark Hamill njengoLuka Skywalker kwiMandalorian (Disney)
Okwangoku, uDin Djarin kaPascal unokuba nemicimbi yakhe ekufuneka eye kuyo. Kwisiphelo sokugqibela uhlasela uMoff Gideon (Giancarlo Esposito) kumlo kwaye uthatha i-Darksaber - isixhobo esaziwayo saseMandalorian esiphethwe ngumlawuli weplanethi iMandalore - ukunika uKatee Sackhoff uBo-Katan Kryze, owayesele eyizingela okwethutyana.
Ngelishwa, njengoko uMoff uGidion wachaza ukuba wayefuna ukuphumelela i-Darksaber emfazweni ukuyifuna, kunye noBo-Katan akakwazi ukuyithatha kwi-Din ngaphandle kokubongoza kwakhe ngaphandle kokuba alwe naye kuqala. Olu xinzelelo lwakhawuleza lwagqobhoza ngokufika kwabaMnyama abaMnyama ngakumbi kunye noLuka, kodwa siyabheja asibonanga okokugqibela komlo weDarksaber eMandalorian. Ngubani owaziyo? Mhlawumbi emva kwalo lonke eli xesha ekugqibeleni siza kundwendwela iMandalore uqobo, engekabonakali kwi-Disney + series.
Kwaye kukho umsonto omnye oseleyo oxhonyiweyo, emva kokuba uMoff Gideon etyhile ukuba wayesele ethathe igazi likaBaby Yoda's Force-friendly ngaphambi kokufika kweqela. Laya phi igazi? Ukuba ayinguMoff Gideon, ngubani oyisebenzisayo, kwaye yintoni? Ngaba inxulunyaniswa noNyoka kunye nokubuya koMlawuli kwi-Skywalker yokugqibela, okanye ngaba kukho enye injongo yokukhohlisa?
Ngandlela thile, sicinga ukuba ixesha lesithathu le-Mandalorian liya kusikhokelela ekufumaneni.
Ngaba ikhona itreyila ye-3 ye-Mandalorian?
Hayi okwangoku. Lindela ukubona ukujonga kwethu okokuqala kwisizini elandelayo xa umboniso uqala ukufota kwi-2021.
IMandalorian iyafumaneka kwiDisney Plus. Bhalisela iDisney + ngoku nge- $ 5.99 ngenyanga okanye i- £ 59.99 yonyaka opheleleyo. Jonga uluhlu lwethu lwe bIimuvi kwiDisney Pluskunye bibonisa kwiDisney Plus, okanye ndwendwela Isikhokelo sethu seTV ukubona ukuba yintoni le ngokuhlwanje.
ngubani adele im a celebrity
umdlalo weetrone uchungechunge olutsha
amatikiti e-chelsea vs atletico madrid
iingelosi amanani joanne
ivuthwa nini ipapaya ukutyiwa